Knowledge – Myanmar Update News
ဇနီးတယောက်က…မယားကြီးလိုလည်း နေတတ်ရမယ်၊ မယားငယ်လိုလည်း နေတတ်ရမယ်
“ မိန်းမဆိုတာ ” မယားကြီးလိုလည်း နေတတ်ရမယ်၊မယားငယ်လိုလည်း နေတတ်ရမယ် ဒါကိုမြင်ပြီးလန့်မသွားနဲ့ဦးမယားကြီးလိုနေတတ်ရမယ်ဆိုတာက မယားကြီးတွေဟာ အိမ်ထောင့်တာဝန် ချက်ရေးပြုတ်ရေး၊လျှော်ရေးဖွတ်ရေးကအစ ကလေးတာဝန်နောက်ဆုံး နှစ်ဖက်မိဘ ဆွေမျိုးယောက္ခမတွေအတွက်ပါ သိတတ် လိမ္မာတတ်နဲ့လင်ယောက်ျား စီးပွားရှာချိန်မှာ နောက်ဆံမတင်းရလေအောင် သိပ်ကိုတော်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်။ အဲ့လို ယောက်ျားပေါ်အလိုက်သိလွန်းပြီး အိမ်ထောင့်တာဝန် ကလေးတာဝန် မိဘတာဝန်တွေကျေပွန်လွန်းတဲ့အခါ“အော်… ငါ့အပေါ် သူသိတတ်လွန်းပါလား ငါ့ကြောင့်ပင်ပန်းလွန်းပါလား သူ့ကြောင့်သာ
Gasကုန်တယ်ဆိုပီး အလိမ်ခံနေရသူများအတွက် … ဆိုင်တွေက ထည့်တက်တဲ့ ဂျင်းတွေ
News-Update | June 2, 2021
ရေခဲသေတ္တာတွေ၊ အဲကွန်းတွေမှာ ဂတ်စ် ကုန်တယ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သုံးလိုက်လို့ ကုန်သွားတယ် ဆိုတာမရှိပါဘူး။ အချိန် ကြာလို့ ကုန်သွားတယ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ နေရင်းထိုင်ရင်း ကုန်သွားတယ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ တစ်သက်လုံးသုံး တစ်သက်လုံး မကုန်ပါဘူးတဲ့ မီးဖို gas တွေလို ဖောက်ထုတ် မီးရှို့ ပစ်တာ မဟုတ်လို့
မြန်မာမှာကော ကမ္ဘာမှာကော ဘဏ်တွေပြိုလဲသွားလို့ ဘဝပျက်သွားတဲ့ ဘဏ်သူဌေးဆိုတာ လုံးဝမရှိပါဘူး။၂၀၀၃ မှာ အာရှဓနဘဏ်ဟာ US Sanction ကြောင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခံရပါတယ်။ စာရင်းရှင်းလင်းပြီးချိန်မှာ ဘီလီယံ ၂၀ လောက်ပိုက်သွားသေးတယ်။ ပြည်သူအများစုကတော့ ဘဏ်စနစ်ကို အယုံအကြည်တော်တော်နည်းသွားစေခဲ့တယ်။ ဘဏ်ပြိုလဲသွားရပြီဆိုတဲ့ ဘဏ်သူဌေး ဦးအိုက်ထွန်း ကြီးက သူ့ရဲ့ Olympic Construction ကို ၂၀၀၄
News-Update | May 17, 2021
ရတနာတွင်းကြီးလို့ ခေါ်လိုက်ပါရစေနော်။ တကယ်တမ်းကတော့ သဘာဝအတိုင်းဖြစ်တည်နေတဲ့ လူးတွင်းကြီးပါ။ အဲ့ဒီအထဲမှာတော့ ကျောက်မျက်ရတနာမျိုးစုံ ပြည့်နှက်နေပါတယ်နော်။ အဲ့တွင်းကြီးက ကျောက်ကြီးရွာရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ တည်ရှိပါတယ်နော်။ကျောက်ကြီးရွာဆိုတာဟာ ကျောက်ကြီး နည်းပညာတပ်ရဲ့ ဘေးနားကပါ။အဲ့ဒီ နားက ဒေသတစ်ဝိုက်ဟာ ရွှေ ငွေ သယံဇာတ ကျောက်မျက်ရတနာတွေများစွာ ထွက်ရှိတဲ့ ရတနာနယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။ သပိတ်ကျင်းနယ်ထဲကနေ ထွက် တဲ့ ပတ္တမြား နီလာတို့ဟာ
မြန့်မာရိုးရာ အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးနည်း (စ-ဆုံး) တွက်နည်း အမျိုးသားနံ နှင့် အမျိုးသမီးနံ နှစ်ခု ပေါင်းရမည်။ ဥပမာ.. တနင်္ဂနွေ(၁) +ဗုဒ္ဓဟူး(၄) ၁+၄=၅. ဖြစ်သည်။ ရလဒ်ကို ၅ဖြင့် မြောက်ရမည် ။ ၂၅ ရသည်။ ထို့၂၅ အား ၇ ဖြင့်စားရမည်။ အကြွင်း ၄ ရပါသည်။ထို့နောက်
News-Update | May 9, 2021
“လိုတိုရှင်း” ဘဏ်ရဲ့သ​ဘောက ငွေအပ်လာသူများ ရဲ့​ငွေကိုအတိုး​ပေး (ထားပါ​တော့ တနှစ်ကို ၈% တွက်ရလွယ်​အောင်) ငွေလာချေးသူများ ထံက​နေ အိမ်ဂရမ်လို အ​ပေါင်ပစ္စည်းယူ ပြီး ဥပ​ဒေ ခိုင်မာ​အောင် စာချုပ်ချုပ်ပြီး အတိုးနှုန်းတခု (ထားပါ​တော့ တနှစ်ကို ၁၂%) ကြားကအမြတ် ဘဏ်ကစားရတယ် ကျန်တဲ့ ဝန်​ဆောင်မှု​တွေ (​ငွေလွှဲ/ ခရက်ဒစ်ကဒ်/ LC/ TT)
အမြစ်ပွားဆေး (အမြစ်သန်ဆေး ) ပြုလုပ်နည်းနှင့် အကိုင်းကူးနည်းများ ဗဟုသုတ ဖြစ် လိုအပ်သူများအတွက် မျှဝေပေးလိုက်သည်။ အမြစ်ပွားဆေးကို ဘယ်နေရာတွေမှာ သုံးဘဲဆိုရင် အကိုင်းကူး! အကိုင်းဆက် ! အပင် အမြစ်အားဆေးအဖြစ်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ် စိုက်ခင်းနဲ့ သစ်ပင်တွေကိုလည်း အားဆေး မြေသြဇာအနေနဲ့သုံးနိုင်ပါတယ် အမြစ်ပွားဆေး လုပ်ရတာ လွယ်ပါတယ် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ (1)စိမ်းစားငပိ
News-Update | May 7, 2021
” ငါလာမှ သီး၊ ငါလာမှ ကြီး ” ဆိုတဲ့ မကျွတ်လွတ်သေးတဲ့ ဗိဿနိုးဘုရင်မ ပန်ထွာရဲ့ အ.မု.န်းကျိ.န်စာနဲ့ ပေပင်လေး‌တွေ ” ငါလာမှ သီး ၊ငါလာမှ ကြီး ” တဲ့လား ဖေဖေ ၊ သူ့ကျိန်စာကလည်း စိတ်ဝင် စားစရာကောင်းသလို ….. ဒီဒေသက ပေပင်လေးတွေကလည်း အသီးမသီးဘူး၊ နှစ်ရာထောင်ချီနေတာ